पात हल्लिदैमा रुख ढल्दैन | परिसंवाद
गफाष्टक आइतबार, मंसिर २८, २०७७ मा प्रकाशित
ओलीले अब दुवै पद गुमाउने भए नि भिरघरे । अरुलाई मान्छे गनेनन् । अब जाने भए । काँग्रेस पनि अब हाम्रै प्रचण्डको लाइनमा आइपुग्यो । राजावादीहरु पनि उफ्रिदै छन् । अब त केही हुन्छ होला !
हौ काका ! यिनार्को चुरीफुरी ओलीकै कारणले देखिएको हो । जे सुकै भए पनि इतिहासमा लेखिने दुई चारवटा काम ओलीले गरिदिएका छन् । अहिले त्यसैको व्याज खादै छन् ।
हैन के त्यस्तो काम ओलीले गरेर इतिहासमा लेखिन्छ ? लेखिए हाम्रो महान अध्यक्ष प्रचण्डको लेखिन्छ । अरु कुनैको लेखिदैन ।
के भन्छौ हौ काका ! प्रचण्डको त इतिहासमा लेखिएकै छ नि । तर, इतिहास इतिहास नै हो कसैको राम्रो लेखिन्छ कसैको नराम्रो । प्रचण्डको कस्तो लेखियो दुनियाँलाई थाहा छदै छ । अतितले लखेटेर प्रचण्डलाई फतक्क गलाई सक्यो । ओलीको संरक्षणमा अलि अलि चुदुरवुदुर गर्दै छन् । नत्र….!
नत्र के ! काँग्रेस भर ओलीको समर्थन गर्छस् । उहाँ काठमाडौंमा काँग्रेसका नेताहरु हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडको लाइनमा आइसके । तिमारु काँग्रेसहर्को जुलुसमा हाम्रो माओवादी केटाहरु पनि सामेल भएर ढुङ्गामुढा गर्ने निर्देशन भैसक्यो । ओलीको विरोधमा राजावादीले आन्दोलन गरे पनि, काँग्रेसले गरे पनि, मधेशवादीले गरे पनि, गोप्य तरिकाले नैतिक रुपमा उग्रतापूर्वक हाम्रो केटाहर्को डरलाग्दो र भयङ्कर समर्थन रहन्छ ।
त्यस्तो समर्थनलाई हामी मान्दैनौ र चाहिदैन पनि । काका तिमार्को एक सूत्रे कार्यक्रम ओलीलाई लखेट्ने हो । हाम्रो त्यस्तो होइन । हाम्रो शान्तिपूणर् तरिकाले सरकारका गल्तीहरु औंल्याउने र सुधार्न दवाव दिने हो । ओलीलाई नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ता सञ्चालन गर्न भनेर पठाएका हुन । उनलाई हटाउनु भनेको फेरि गलत बाटोमा राजनीतिलाई धकेल्नु हो । हाम्रा नेता गिरिजाले २०५० सालमा आफ्नो बहुमतको संसद आफैं विघटन गरेर देशलाई लामो समय अस्थीरतामा होमे । अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरु त्यही दुर्वुद्धि पथमा छन् । कि कसो झुम्री काकी !
हो नि भिरघरे ! तर एउटा खाटी कुरो के भने ‘पात हल्लिदैमा रुख ढल्दैन’ । अहिले नेकपामा पात हल्लिएको छ । कतिपयलाई पात हल्लिएको देखेर भ्रम पनि होला रुखै ढल्न लाग्यो भन्ने । त्यस्तो कल्पना नगरे हुन्छ वनमारा झारले ‘सतिसाल नाथे के हो र’ भने जस्तै हो ।
नकरा झुम्री ! सतिसाल भनेको हाम्रो गौरवशाली पार्टीको महान अध्यक्ष कम्रेड प्रचण्ड मात्र हो । अरु त जंगलका वनमारा मात्र हुन् ।
लु त्यसो चै होइन है काका ! तिमीले जेसुकै व्याख्या गरे पनि यो मुलुकको सबै भन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो प्रचण्ड त हाम्रो रामचन्द्र पौडेल जस्तै दोस्रो लम्वरका हुन् । हौ काका तिमार्को वानी नै लुतो कन्याएपछि एकछिन सन्चो हुँदा नै चट्टै निको भयो भन्ने खालको छ ।
हेर भिरघरे ! कुनै बेला हाम्रो पनि दवदवा थियो, हातमा बन्दुक र विचारमा उदण्डता, हाम्रो चिनारी थियो । मैले त चुनवाङमा र भृकुटीमण्डपमा बाबुरामले भनेको होइन मोहन बैद्यले भनेको मान्नु पर्छ भनेको थिएँ । काम्रेड प्रचण्डले बाबुरामको लाइन नपक्रे प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन भन्ने ठाने छन् । समयकालले आफ्नै कट्टर विरोधी ओलीको पाउमा त्वम शरणम् हुनु पर्‍यो । अहिले ओलीलाई पहिलाको बदला लिन खोजेर कहाँ सक्नु !
ए काका ! चिनसंगको व्यापार सन्धि गर्न महामानव विपी कोइराला र राजा महेन्द्रले पनि कोसिस गरेका थिए । तर, सकेनन् । इतिहासले त्यही भन्छ । आखिर ओलीले नै गरे । दोस्रोमा चुच्चे नक्शा ओलीकै पालामा जारी भयो । २०३१ सालदेखि हराएको नक्शाको चुच्चो राख्न राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, कृष्णप्रसाद, गिरिजा, शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथहर्ले नसकेकै हो । आखिर त्यो जस ओलीले नै लिन पाए । अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा नाकाबन्दीमा ओलीले भारत जस्तो मुलुकलाई लुरुक्क झुकाएरै छाडे । जबसम्म नाका खुल्दैन तबसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्ने ओली नै हुन । हाम्रो कांग्रेस र तिमार्को प्रचण्ड काम्रेड त नाकाबन्दी लगायो भनेर बोल्न पनि सकेनन्।
मेरो कन्सिरी तात्ने गरी ओलीको प्रशंसा नगर भिरघरे ! गर्छस् भने प्रचण्ड काम्रेडको प्रशंसा गर!
होइन, प्रचण्डको प्रशंसा कसरी गर्नु ? १७ हजार चिलिमच्वाँट भन्न मिलेन पाँच हजार मात्र आफुले जिम्मा लिने घोषण गरे । क्यान्टेनमेन्टको १३ अरवको कुरो पनि के गर्नु ! नौ अरव मात्र भने क्यारे । नातागोता, परिवारवाद जिन्दावाद भन्न पनि मिलेन । सर्वहारा नेता सादा जीवन उच्च विचारका सफल नेता भनौ भने ‘भिरघरे पनि खुस्किएछ’ भनी हाल्छन् !
सोह्रै आना ठिक भनिस भिरघरे । यो चै इतिहासमा लेखिने र अहिलेदेखि नै पढिने कुरो हो ।
वाइयात कुरो नगर झुम्री ! अहिले काँग्रेस र एमालेहर्ले हामीलाई हेपेका छन् । भोलि काँग्रेसको जुलुसमा हाम्रो पराक्रम देखेपछि जिउँदो माओवादीको फेला परिएछ भनेर ओली र देउवाले भन्ने छन् । अहिले तिमार्लाई पात हल्लिए जस्तो लाग्दै छ । जब रुख ढल्छ अनि थाहा पाउँछौ ।
झिङ्गाको सरापले डिङ्गा मर्दैन हौ काका ! प्रचण्डको हतारोले सरकार पनि ढल्दैन । ओलीले भनी सके ‘पंखा हल्लाउदैमा आँधी आउदैन’ भनेर ।
आ छोड यस्तो कुरो । मलाई विरक्त लाग्छ । बरु काठमाडौंमा के गर्दैछन् सुनान !
कारोनाले नुवाकोटमा यसपटक गोरु जुधाई खेल हुन पाएन क्यार । नेकपाका नेताहरु आपसमा जुधेर दुनियाँ हसाउँदैछन् । काँग्रेसको भोलि भव्य आन्दोलन हुँदैछ । जबज, समाजवाद फस्टाउँदो छ, प्रचण्ड पथ अजङ्गको पहरामा पुगेर तुरिएको छ । यस्तै छ । लौ काका काकी ! रात पर्न लाग्यो । म घरतिर लागे ।
बुढ्यौलीमा पुत्र शोक